Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Ukubonisa kwangaphambili simahla kwi-IMEX America
Isazi sengqondo seHarvard esiqeqeshwe, iinkokheli zokuzinzisa umhlaba, iintshatsheli zoyilo lomnyhadala, ingcali yokuziphatha komntu, kunye nomhloli otyhafileyo wentlango konke kukhokelela ekufundeni kwi-Smart Monday, exhaswa yi-MPI.
Entsha ye-2021 luthotho lwee "Headliners," zonke izithethi ezimeleyo kwimihlaba yazo.
Ukufunda kwangaphambili kubonisa iQonga leNtlanganiso yesiGqeba, iQonga lobuNkokheli boMbutho, kunye neShishini lakhe.
Iiseshini ezinikezelweyo kumaqela ohlukeneyo emveliso zivumela abo bezimeleyo ukuba babonise amava abo ngoMvulo weSmart.
Kukho i-ajenda ejolise kwikamva le-Smart ngoMvulo- usuku olukhululekileyo, olupheleleyo lokufunda ngo-Novemba 8, olwenzeka ngaphambi kokuba i-IMEX America iqale ngo-Novemba 9-11 eMandalay Bay, eLas Vegas.
Ugqirha, umbhali kunye nosomashishini osentlalontle jikelele, uGqirha Shimi Kang, uqalisa usuku olunamandla. Unjingalwazi oDibanayo weKlinikhi osuka kwiYunivesithi yaseBritish Columbia, uGqirha Kang uza kwenza intetho ephambili ngoMvulo. "Kum, eyona ndawo inomdla kwisayensi kunye nomxholo wobomi bam ebomini yi-neuroscience yomntu-isifundo sokuba singobani kwaye kutheni siziva kwaye siziphatha ngendlela esenza ngayo. Kwinzululwazi, sifumana iimpendulo ezininzi kunye nenkuthazo yokuqhubela phambili kulangazelelo lwethu lolwazi, ”ucacisa watsho. Ehambisa izifundo zakutshanje kwi-neuroscience yempilo yengqondo, ukomelela, ubunkokeli kunye nokusebenza, uGqr Kang uza kubonelela ngophando olusebenzayo olusekelwe kwimigqaliselo enokusetyenziselwa impilo engcono, uthando kunye nenjongo.
UGqirha Shimi Kang, ugqirha, umbhali kunye nosomashishini wentlalontle kwihlabathi liphela.
Iintloko zeentloko zihamba phambili kumthetho oyilwayo
Entsha ye-2021 luthotho 'lweentloko,' zonke izithethi ezimileyo kumabala abo. Bakhokele inkqubo egcwele ngaphambili yokufunda ekwabandakanya iQonga leNtlanganiso yesiGqeba, iQonga lobuNkokheli boMbutho kunye noShishino lweMean, umsitho odibeneyo we-IMEX kunye nemagazini ye-TW, exhaswa yi-MPI.
• UJanet Sperstad, uMlawuli weFakhalthi kwiKholeji yaseMadison kunye noGuy Bigwood, uMlawuli oyiNtloko we-Global Destination Sustainability Movement bazakukhokela iseshoni: Ikamva esilifunayo: Ukunyanzela inguquko evuselelayo. Oku kuyakwakha kwi-IMEX uphando Babhale kunye ngokudibanisa indalo yendawo kunye nendlela yokubandakanya imigaqo yoqoqosho setyhula kuyilo lomsitho.
U-Ruud Janssen kunye no-Roel Frissen abasunguli be-Event Design Collective bajonge ixesha elide kuyilo lomsitho. Kwiseshoni yabo, UYILO LOKUTSHINTSHA-Ukuphakamisa amandla akho ukuze ujonge kwaye usebenze ngaphaya kwangoku, Baya kukhupha umnxeba kwiingalo ukuze bamkele umbono ojolise kwikamva.
• Kuya kuthini xa abacwangcisi bemisitho beshiya kubalo lwabantu kwaye besamkela amaxabiso abalulekileyo abantu ukuze benze iminyhadala enamandla ngokwenene? Lo ngumbuzo obuzwe nguDavid Allison umsunguli weValuegraphics. Ukuqhekezwa kwedatha yakhe yomhlaba jikelele ibonisa ukuba kutheni amaxabiso ethu-hayi amanani abantu-aqhuba kunye nefuthe lokuziphatha kunye nokwenza izigqibo. Mamela kudliwanondlebe lwe-IMEX Podcast noDavid Apha.
• Intloko yentloko yokugqibela iya kuthatha abantu abaya kuhambo oluya entlango. UDaniel Fox, umhloli wamazwe, umfoti wezendalo, umthandi wezilwanyana zasendle kunye nombhali wabelana ngamava akhe egridi Imithetho ye-FOX: Lindifundise ntoni ixesha lam entlango malunga nokulawula umngcipheko, ukungaqiniseki, utshintsho kunye nendlela yokusebenzisa ezo zifundo ukuze uphile ubomi obuninzi.